IFTIINKACUSUB.COM: La'jiifiyaana banaan, halkay ka timi?
Somalidu waxa ay leedahay ,hadalo iyo halku-dhigyo lagu tilmaansado waxyaabo badan oo nolosheena ka mida,marka laga warbixinaayo Maahmaaha Somalida iyo halku-dhigyada aynu leenahay,waxa aad arkaysaa in ay yihiin badan koodu kuwo xaqiiqda ku qotoma.
Waxa aynu wax badan maqalnaa ,halku dhiga ah,Lajiifiyaana banaan,halku dhigaasi,ayaa waxa aan rabaa sida ay aniga igu soo gaadhay in aan dhalinyarada qaar ka mida u iftiimiyo meesha ay ka timi iyo halka uu kasoo jeedo.
Xoolaha looyaqaano Lo'da ,ayaa waxa ay daaqday ,sida aan maqlay , Beer uu markaasi nin iska leeyahay,sida tariikhda markaasi lagu hayana waxa la sheegaa in Lo'daasi ay dhamaan Beerta inteedii u badnayd ay xaalufisay.
Hadaba iyada oo wakhtiyadii hore inta badan,ay dadku isula tagi jireen culimada si ay u kala saraan,ayaa waxa Lo'dii dabada kasoo kaxeeyay,Ninkii beertaasi iska lahaa,waxa kaloo iyana la socda dad badan oo markaasi markhaati ka ahaa in ay Lo'dani tahay tii Beerta cuntay.
Markii sheekhii loola yimi garnaqsigii,loona sheegay in Lo'dani ay dhamaanba Beertii cuntay ama ay xaalufisay,ayaa waxa uu sheekhii ama wadaadkii uu guda galay sidii uu xukun u saari lahaa cida Lo'dan iska leh.
Waxa uu soo qaaday ayaa la yidhaahdaa Ul (dhangad) kadibna inta uu badhiga dhulka ugu qotomiyay,ayaa waxa uu yidhi,cida Lo'da iska leh waxaa laga rabaa in ay bixiso,Ushaasi mugeeda oo saracii Beerta ku yaalay ah.
Balse markii sheekhu uu xukunkaasi riday,ayaa waxaa dadkii qaar ka midii ay sheekhii ku wargaliyeen ,in Lo'du ay tahay tiisii uu iska lahaa, sheekhi hadal-kalaba muu galine,inta uu Ushii uu sida tooska ah u qotomiyay uu qaloociyay ama uu janjeedhiyay ayaa waxa uu yidhi hadalka ah "la'jiifiyaana banaan".
Taasi waxa ay ku tusinaysaa cadalad-darada dadka qaarkood ay samaynayaan,marka ay naftooda iyo cidkale u kala garsoorayaan,iyada oo uu wanaagu yahay in ay naftaada iyo cadalada aad dadka u samynaysaa ay noqoto mid loo siman yahay .